Marka 15: 1-47
Toriteny na fanazavàna - "Que feras-tu de Jésus?" "
Toriteny na fanazavàna - "L'importance de la Croix" "
Marka 14 Marka 15 Marka 16
Ary niaraka tamin'izay raha vao maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona sy ny mpanora-dalàna mbamin'ny Synedriona rehetra dia niara-nisaina ary namatotra an'i Jesosy ka nitondra Azy, dia nanolotra Azy teo amin'i Pilato.
Ary isaky ny avy ny andro firavoravoana dia fanaony ny mandefa mpifatotra iray izay angatahin'ny vahoaka .
Ary nisy anankiray izay atao hoe Barabasy, nifatotra tao mbamin'ny mpikomy sasany, izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana.
Fa Pilato namaly azy ka nanao hoe: Tianareo va raha ny Mpanjakan'ny Jiosy no halefako ho anareo?
Ary Pilato ta-hahazo sitraka tamin'ny vahoaka, ka dia nandefa an'i Barabasy ho azy; fa Jesosy nasainy nokapohina,dia natolony azy mba hohomboana amin'ny hazo fijaliana.
Ary ny miaramila nitondra an'i Jesosy ho eo an-kianja, dia ao anati-rova,sady nanangona ny miaramila namany rehetra.
Ary Simona Kyreniana (rain'i Aleksandro sy Rofosy), izay nandalo avy tany an-tsaha, no notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy.
Ary tamin'ny ora fahatelo no nanomboany Azy tamin'ny hazo fijaliana.
Dia tanteraka ny Soratra Masina izay manao hoe: Ary natao ho isan'ny mpanota Izy(Isa.53.12)
Ary izay nandalo dia niteny ratsy Azy sady nihifikifi-doha ka nanao hoe: Hià! ry Ilay maharava ny tempoly sy mahatsangana azy amin'ny hateloana,
vonjeo ny tenanao, ka midina hiala amin'ny hazo fijaliana.
Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: Eloy, Eloy, lamà sabaktany! Izany hoe, raha adika: Andriamanitro ô, Andriamnitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao? (Sal.22.2)
Ary ny anankiray nihazakazaka, dia nanatsoboka sipaonjy tamin'ny vinaingitra, ka notohiziny tamin'ny volotara, dia natohony hotsentsefin'i Jesosy, fa hoy izy: Aoka hoe hizahantsika na ho avy hampidina Azy Elia, na tsia.
Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny, raha nahita fa afaka toy izany ny ainy, dia nanao hoe: Marina tokoa fa Zanak'Andriamanitra io Lehilahy io.
Ary izy nividy hariry madinika, dia nampidininy ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny hariry madinika, ary naleviny tao amin'ny fasana, izay nolavahana tamin'ny vatolampy, dia nanakodia vato ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy.